NoqoMaana-faay Q.2aad Soco..
Sahra Yuusuf guri Bulukeeti ah oo 4 qol ka kooban ayaa mid u kiraysan yahay. Aad bay u nadiifisay una sharraxday. Geeska midig waxaa gidaarka cirifka ku haysa sariir foormiig ah oo si fiican u goglan, koomadiin sideeda u madow baa ag yaalla. Harqad ama maro yar oo ay gacanteeda ku toshay baa ku fidsan. Rikoor baa sii dul saaran. Cajalado badan baa dhinac rasaysan. Dabaqiisa hoose waxaa saaran wargays sheeko sawiran ah (fotoromanso). Gasada waxaa ka soo jeeda armaajo gaaban oo iyana sariirta u eg. qaanadaheeda mid baa nus furan, dhar dumar baa ka soo jeeda. Harqad tii koomadiinka u eg kase weyn baa dul saaran. Qasacado iyo dhalooyin yaryar oo fara badan baa kor safan. Waxaa qaarkood ka dhammaaday qaarna wali ku jira barafuun iyo waxyaalo kale oo dumarku isku carfiyaan ama isku qurxiyaan. Gidaarrada sawirro iyo farshaxan baa ku teedsan. Dhanka bidix waxaa fidsan saalooto yar oo madow. Waxay ka kooban tahay hal kursi oo laba qof ku filan iyo laba kale oo kasoo har jeeda, miis yarina u dhaxeeyo.
Kursiga ballaaran ee iridka ku jeeda waxaa isku barakaadisay Sahra Yuusuf. Gacmihiisii kala fogaa bay midna isku tiirisay midna lugaha dul saaratay. Maana-Faayna kursi gacma leh ee ka soo hor jeeda ayay ku dhacadiiddaa. Qudheeda kama qasna, martina uma eka. Marba dhankii ay doontay u maja fidsanaysaa. Faantadeedana fiiqsanaysaa. Sheekaa baxaysa. Qosol baa bururaya. Muusik baa birmanaya. Hadalkaa la kala boobayaa. Kaftanka iyo fara-ka-cayaarkaa la isku tuurtuurayaa. Carrada in dad kale ku nool yahay lama dareensana.
Gaw-gaw-gaw!! Iridkaa la garaacay. Jag! Sheekadii baa la xiray. Dhegahaa la taagay. “Hoodi hoodi,” baa soo yeertay. Wegarey wegar! Waa cod rag. War cusub! Waa la is-hayaa. Sahra intay jiifka ka boodday bay qun u fariisatay. Guntiinadeedii furfurnayd bay meelihii ay ka soo xeydantay kor iyo hoos ugu fidisay. Xornimadii la isugu yimide ma aragtaa!
Maana-Faay iyadu naxdintii runta ahayd bay naxday. Wiish baa samada uga yeeray. Intay kud isku tiri bay afarteedii addinba soo uruursatay sidii diin khatar dareemay. Faantadii ay fiiqsaneysey miiskay degdeg u dul dhigtay, sidii qof tuugo lagu qabtay. Garba saartii kursiga gacantiisa u saarnayd bay la soo boodday. intay hagoog jiq isku siisay bay gidaarka xaggiisa u jeesatay.
Sahra markay diyaar-garowday bay intay albaabka dhinac u furan yahay indhaha ku taagtay, qofkii aan loo jeedin ee idanka waydiistay ku tiri, “Yaa waaye? Soo gala!”
Waxaa soo galay inan da’diisa dhawr iyo labaatan jir lagu qiyaaso, maarriin dhuuban ah, dhabankiisana ladnaani ka ifayso. Hadalkiisu waa ka soo horreeyaa, “Hambalyo! Caawa aad baad u faraxsan tahay. Sheekadaada iyo qosolka kaa baxaaya xaafad shanaaddaa laga soo raacayaa.”
Intay kursigii uga kacday, farxaddeedii duushayna dib u soo ceshatay. bay tiri, “Haye Axmed, ii warran beryahaan waaba lagu waayaye, caawa yaaba kaa roon!”
Iyadoo wali hadalkii wadata ayuu intuu Maana ku jeestay, si xushmad leh ugu yiri, “Jaaw abbaayo.”
Maana madax rux keliya ayay ugu jawaabtay. Sahraa hadalkeedii sii wadatay, ee tiri, “Qoftaan aan isku dheer nahay baa ii timidoo sheekadu isugu kaaya baxdaye.” Axmed waxba isma martiyeyne. intuu si deggan, isku kalsooni iyo isla weyniyina aanay ka marnayn u soo tallaabsaday, ayuu kursigii weynaa ku dangiigsaday. Sahrana intay dibadda u yare baxday, haddana dib u fariisatay bay tiri, iyadoo Maana-Faay gacanta ku taageysa, Axmedna hadalka u jeedinaysa, “Gabadhaan iska baro, waa saaxiibtay. Maana-Faay baa la dhahaa. Maana, wiilkaan waa walaalkay Injineer Axmed Jaamac.”
Maana intay hal mar milicsatay, haddana indhihiisa hoos uga gabbatay, bay cod si dhib leh lagu maqlaayo hoos ugu tiri, "Barasho wanaagsan," iyadoo dhulka fiirinaysa, iskuna dayaysa in ay qariso yaxyaxa lama filaanka ah ee jirkeeda saaqay.
Axmedna intuu si xiisa leh isha gees-gees ugu shiishay buu cod macaan ku yiri, "Jaaw Maana-Faay, barashadaadu waa ii farxad weyn." Weli eegmadii dulucda lahayd kama dul qaadin. Dhoolla caddayskiina kama xirin. Quwad dahsoon oo uusan garanayn baa dhankeeda u jiidatay dunidii kalana illaawsiisay. Wuxuu u holladay in uu ku tuuro eray macaan oo kaftan iyo af gobaadsi isugu jira, si uu qalada uga saaro, hase yeeshee eraygii cunihiisa sooma dhaafin. Waxaa hakiyey dareen aan caadi ahayn oo ay ku soo bitisay quruxda aan caadiga ahayn ee hortiisa ka muuqata.
Subxaanah! Waxaan qurux miyaa? Tanina ma Xamar bay ku noolayd? Ka marag in aysan i soo marin qoortaan mulaaxda ah, midabkaan dahabiga ah, dhabannadaan cuddoon, indha-malaa'igeedkaan la moodo in ay hurdo soo hayso iyo tintaan sayn-fardoodka u eg ee indha daraandarka ah! Laakiin sug. Waxaad mooddaa in ay gaaban tahay. Bal marka ay istaagtaan si wanaagsan u eegi doonaa.
Sidii loo bixi jiray buu u baxay, soomana noqon, ilaa uu maqlay codkii Sahra oo dhankiisa bidix ka leh, "Maxaad la aamustay, maad noo sheekaysid? Ula kac bay filinka uga kala goysay, ka dib markay wajigiisa ka aqrisatay dareenka maskaxdiisa ku meehannaabaya.
Axmedna intuu is gartay buu ugu jawaabay isagoo xabbad sigaar ah diyaarsanaya, si ay deggenaanta ugu caawiso, "Sheekee adigaa marti laguu yahaye!"
Cabbaar la iska sheekaysay, Maana-Faay iska tagtay, markay u adkaysan wayday ninka hor fadhiyee aan kici rabin, eegmada dulucda lehna ka daynayn. Jawigeedii farxadda lahaa buu ka jiiray, xornimadii buu ka ciriiriyay. Culays buu ku noqday. Intay saacadda fiirisay bay iska kacday. Sahrana way sii dhaweysay, kana soo laabatay.
Axmed markaasuu intuu sal muggi u fariistay Sahra xog waraysi ku bilaabay, "Sahra, malaa'igtaan yari maxay ahayd, saaxiibtaa miyaa?" ayuu si kaftan dhable ah ugu tuuray, isago indhihiisu qarin kari la'yihiin ahmiyadda weyn ee uu su'aashaas siinayo.
"Saaxiibnimo saas ah maaha, laakiin yarta si fiican baan isu naqaan. Berigii aan Xamar Weyne degganayn baan is barannay," Sahraa ugu jawaabtay.
Sahra waa ina eeddadi ay isku aqal ku soo koreen. Waa isku da', gabdhaha walaalihiis ahna iyaduu ugu jecel yahay. Sidii laba wadeey bay u sheekaystaan, sirta qaarkeedna way isku qarsadaan sidii laba gabdhood oo is jecel. Sahra mar baa la guursaday, iyadoo aan weynayn baa nin lagu daray. Muddo gaaban ka dib way wada noolaan kari waayeen. Markay in badan ka carartay buu iska furay.
Sidii ay ninkeedii u kala tageen gooni ahaan bay u degganayd. Arrimaha dhallinyarada khabiirad bay ku tahay, laakiinse ma aha hablaha falal xumada yaqaan. Waa shaqaale dawladeed, sharafteedana way dhawrataa. Waxay leedahay saaxiib rasmi ah oo Axmed iyo cidda oo dhammiba isku og yihiin, arooskoodana loo wada toog hayo. Waa qof bulshayad ah, aad u maskax furan, hawl kar ah, la moodo in ay da'deeda ka waaya-aragsan tahay.
Axmed wuxuu Sahra ka codsaday in ay rasmi ahaan isu barto isaga iyo Maana-Faay. Haddii ay ahaan lahayd hal sano ka hor markii uu ka soo laabtay waxbarashadii uu toddobada sano dibedda ugu maqnaa, wuxuu halkiisa ku go'aansan lahaa in uu Maana-Faay guursado. Haddase go’aankaas ku degdegi maayo. Muddadii sannadka ahayd ee uu Xamar ka shaqaynaayey waxaa u korortay waaya-aragnimo weyn. Waxaa isbaddalay fikrado badan oo markuu dibedda joogay uu ka qabay bulshada: xagga hablaha, xagga shaqada iyo guud ahaanba xiriirka dadka.
Aad buu u dherarsan jiray dhammaadka waxbarashada iyo ku laabashada dalka hooyo. Laba arrimood buu ku tala jiray in uu samayn doono markuu Soomaaliya cagaha saaro. Waxay ahaayeen in uu gabar wanaagsan guursado iyo in uu aqoontii uu soo bartay wax badan ku qabto ee dalkiisa u faa’iideeyo.
Labadaas arrimoodba, in kastoo mabda’ ahaan uu weli iska aamminsan yahay, haddana xamaasaddii uu hore ugu hayey wax weyn baa iska dhimay. Sannad dhan baa u dhammaaday, welina guur u hirgalay iyo wax muuqda oo uu dal u qabtay midna uma jeedo. Uma cadda, isla markaasna ma mooga in ay jiraan waxyaalo saameeyey, himmaddiisii xiimayseyna jillaafeeyey. Waxyaabahaasi xagga shaqada iyo xagga dumarkaba way ku soo mareen. Wuxuu la kulmay gabdho badan oo is-araggoodii koowaad hiyi kacshey, quruxdooda iyo qalbi furnaantoodu maanka ka xadday, kaddibna dhuxul dambas huwan ku noqday. Ma yara inta jeer qob moos loo dhigay, mar uu ku kufo iyo mar uu ka tallaabsadaba.
Haddase waayo-arag buu noqday. Beryahaan gabadhii cajabisa wuxuu kula dhaqmaa lugna baqo ugu joog, lugna dagaal. Hadday xumaato intaysan kugu moodin ka mood, hadday fiicnaatana arrimo mustaqbal la indha indhee.
Ciddu aad bay ula jaceshahay in uu guursado. Aabbihii Jaamac Dhegey iyo hooyadii Cambaro Cali-dhoof labaduba way ku guubaabiyaan. Sahra Yuusuf qudheedu way kula talisaa, kalana talisaa. Aad bay ugu han weyn tahay in ay aragto guri walaalkeed leeyahay iyo carruur uu dhalay. Waliba waxay si gaar ah u jaceshahay gabadha uu guursanayaa in ay noqoto mid ay iyada is yaqaanniin. Sidaa awgeed ayay u riyaaqday markii uu yiri “Maana-Faay iskaaya bar.” Waxaa ku soo dhacay Maana iyo Axmed oo is guursaday. Waxay ku riyootay guri walaalkeed oo ay hooyo ka tahay gabadhaas quruxda badan, dabciga wanaagsan, dugsiga sarena ka baxaysa. Markii fikraddaasi ku soo dhacday, ayay intay qososhay Axmed ugu jawaabtay, “Igu duub aniga, anaa ku baraya Maana-Faay!”
Haddana wax bay gocatay. Hal mar bay maskaxdeedu wareegtay. Shaki aan caadi ahayn baa ku dhashay. Nimanka waqtigaan jooga lama aammini karo, walaalkaana ha ahaadee. Gabadhaas miskiinta ah haddaad u soo gacan gelisid, ee uu hadhow mustaqbalkeeda ku ciyaaro. yaa ka mas’uul ah? Maya. Maya. Ha barin. Ha barin. Biyo intay kaa fog yihiin baa la iska moosaa. Haddii kale maad haddeerba runta wajiga ka saartid, hadduuba ku hor fadhiyaaye!
“Dhegayso Axmed!” bay tiri, iyadoo weli fekeraysa, wajigiisana fiirinaysa.
Intuu sidii nin dareen galay u soo eegay buu yiri, “Haye?”
“Horta hawshii aad ii xil saartay waan ku tallaabsanayaa, laakiinse hal shardi baa ku xiran.”
“Muxuu yahay shardigaasi, kolleyba shardi kasta waan kuu oofine?”
“Waxaa weeye in aad ii sheegtid, xiriirka aad gabadhaas ka rabtaa nooca uu yahay, ma guur baa mise waa gaabsi?”
“Aah! Meel xun bay iga taabatay! Guur iyo gaabsi aa! Waxayba u hadlaysaa sidii dadkii hore. Guur iyo gaabsi midnaba kama fekerine quruxdeeda uun baa i jiidatay baan filayaa. Oo horta maxaan ka rabaa? Garan maayo. Keliya waxaan garanayaa in aan rabo. Horta bal soo xera geli, ka dib xiriirikeedu dhankii uu doonaba ha u jihaystee. Ka soo qaad haddii ay…”
Isagoon weli u jawaabin fekerkiina dhammaysan, bay su’aal kale uga nixisay, “Hadal haddee, maxaad la aamustay? Jawaab baa lagaa sugayaa.”
“Adigu xujadaas naga dhaafoo qofta iskaaya bar,” buu ugu jawaabay.
“Markii aan iskiin baro, haddii aad berri ka maalin gabadhaas islaameed ku ciyaartid, dambigaas sow aniga korkayga ma aha?”
“See ugu ciyaarayaa, ma kubbad baa?”
“Mayee waa shabaq! Kuwa intaad been-beenta ku indha sarcaadisaan, markii aad baabi’isaan, godkii aad geliseen uga dhaqaaqaysaan maxay yihiin? Ma kubbad baa?”
“Kulli fidmo waa iyaga, imisa nin bay intay kabihii kala baxeen, isagoo caga cad gegi bannaan soo taageen, ugana dhaqaaqeen?”
“Abboowe raalli ahow, taasi idiinma noqon karto is difaac aad ugu marmarsootaan dambiga aad hablaha ka gashaan.”
“Abbaayo runta haddaad rabtid iyo haddaadan rabinba, hablaha hadda joogaa iyagaa maafiya ah; maafiyana ninkii wax ku darsanaaya waa khasab in uu kula dhaqmo murtida ah: Masku intuusan kugu candhuufin, ku candhuuf.”
“Waan ka xumahay. Meel baad uga dhacaysaa gabdhaha.”
“Ma filaayo in aan sheegay wax aan jirin, haddaadse ka xumaatay iga raalli ahow.”
“Xataa haddii ay jiraan kuwa aad tilmaamaysid, waxa ay samaynayaan aragtay, laakiinse marna ma is waydiisay waxa ku kallifay iyo cidda eedda iska leh?”
“Adiguba ii sheeg, haddaad og tahay.”
“Rag baa ku kallifay, qaabkaasna u carbiyey ama duruuf baa ku kalliftay, haddii la sii cilmiyeeyo.”
“Sahra, waqtigaagii baa la gaaray, aad ina rag oo idil maxkamad millateri soo taagi jirtay,” ayuu yiri, isagoo dhoolla caddaynaya, iskuna dayaya in uu hadalka majarihiisii kaftanka ahaa ku soo celiyo, si ay dooddu u qabowdo, dantiisiina ugu dhawaado!
Sahrase weli kaftan diyaar uma ahayne, iyadoo sideedii iyo si ka sii daran u kulul bay tiri, “Diid ama ha diidin, eedaysanayaal baad tihiin, mana idiin cafinayno dambiyada aad naga gasheen. Bal Ilaah baan kugu dhaarshaye yaa xaq idiin siiyey in aad gabdhaha marka horana jidka xun idinku u horseedaan, marka dambana wixii aad barteen ku caydaan, kuna nacdaan? Yaa idiin banneeyey falka xun in aydan idinku ka xishoon, ee weliba ku faantaan, annagana noo hor kacdaan, markaan idinku raacnana nagu dhaleecaysaan? Miyaanay taasi ahayn badownimo laga yaqyaqsado? Haddii nin waliba halka uu joogo hablaha ka weeraro, xaggee ku baxsanayaan gabadhiisa iyo xaaskiisu? Ma waxay noqonayaan malaa’ig keli ahaantood ka xijaaban isha aadanaha? Sidee kuugu suurtoobaysaa in aad habeen kasta gabar cusub la tumatid, haddana tiraahdid: Ma guursanaayo gabar tijaabooyin hore soo martay?”
Intuu indhihii ay ku soo caddaynaysey kuwo ka cadcad ka hor geeyey, buu yiri, “Miyaad is yeelyeelaysaa? Sidee u guursanayaa qof soo gubatay oo rag hore la soo tuman jirtay?”
“Bal eeg! Waa kaas caqligiinnu, waa caqligii qarnigii labaad. Sidee iyadu kuu guursanaysaa adigoo naago hore la soo tuman jiray?”
“Ma anigay igu dayan kartaa, anigu nin baan ahaye.”
“Sharciga adiga kuu bannaynaya iyadana ka xaaraamaynayaa xaggee buu yaal? ii sheeg! Mise waxaa jira wax aan adiga kaa go’ayn iyadase ka go’aaya?”
“Sharcigu qofna u bannayn mayo, laakiinse dhaqan baa jira, arrimaha qaarkood ragga u bannaynaya haweenkana ku ceebinaaya.”
“Dhaqankii gabooba, ama xaqdarro ku dhisan, sow in laga gudbo ma aha?”
“Hadda adigu aan ku ogaannee ma waxaad u dagaallamaysaa in hablaha tumashada loo banneeyo?”
“Mayee waxaan u dagaallamayaa in aan nimanka ka gooyo xaqa dheeraadka ah ee ay iyagu isa siiyeen iyo xad gudubka ay haweenka ku dulmaan. Tumashadu haddii ay ceeb tahay, waa in aynnu labadeennuba ka dhawrsannaa, haddii kalena aynnu u wada aqoonsannaa wax caadi ah oo qof waliba u baahan yahay ceebna ahayn. Haddaadse aaminsan tahay gabar soo tumatay guur kuma habboona, maad gabdhaha nabad galisid, yaad ku hallaynaysaa in ay guursadaan kuwa aad adigu la tumanaysid? Mise ulakac baad mustaqbalkooda uga madoobaynaysaa? Ma xaq baa in aad hablaha ku cambaaraysaan wixii aad idinku u horseeddeen?”
“Kaba dhig in aan annagu dhankaas horseed ugu nahay, beenta iyo axdi la’aantana yaa ugu horseed ah?”
“Yaa kale? Idinka lee ahaa?”
Intuu isu qoslay buu sidii nin doodda ka baxsanaaya si kaftan u eg u yiri, “Kaalay adiga yaa kuu doortay in aad noqotid qareenka u dooda xaawaley oo dhan?”
“Anigu waxaan xanaaqaa marka aad hablaha dhan dhaleecaysid.”
“Ma diiddani in ay jiraan qaar badan oo wanaagsan, adiguna ha diidin in ay jiraan rag wanaagsan oo gabdhahooda daacad u ah.”
“Haddaba kuwaasaan ku jiraaye iskaaya bar saaxiibtaa Maana-Faay.”
“Iga ballan qaad in aad ka dhiganaysid gabadhaadii mustaqbalka.”
“Waa kaa ballan qaaday, haddii aysan ku dhicin imtixaankayga.”
“Imtixaankaas waa in aan anigu kula saxaa: immisa maaddaad ku imtixaamaysaa?”
“Taasi waxay ka mid tahay sirta imtixaanka, mana bannaana in ardayda loo sheego.”
“Laakiinse anigu ma ahi qoftii la imtixaamayey.”
“Ardaydaad ka mid tahay.”
“Sidee uga mid ahay?”
“Maadaama aad gabar tahay, ma bannaana in laguu sheego sirta ragga.”
“Nacallaa kugu yaal, dhiig laawe! War walaashaa waa lala socodsiiyaa sirta raga, si ay uga digtoonaato shirqoolladooda.”
“Cidna la socodsiin maayo sir laga yaabo in loo gudbiyo qofta aan khamaarka wada dheelayno. Walaashay waxaan la socodsiinayaa wixii aan danahayga halis gelinayn.”
“Sow ma ogid danaystennimadaasi in ay tahay midda lagu haaraamo imbiryaaliyadda?”
“Raalli ahow Sahra, ha igula hadlin afkii siyaasiyiinta. Waan ku ogahay in aad aqoon siyaasadeed leedahaye, ha naga fogayn arrintii aynu ka hadlayney. Ha i illowsiin Maana-Faay, caawa iyada uun baa ii darane; bilixsaanik gacan igu sii sidaan ku heli lahaa, ka dibna danayste iyo imberyaaliiste waxaad doontid igu magacaw.”
Intay qosol yar ku dhufatay bay kaftankeedii sii wadatay, ee tiri, “Laakiin walaalle, diyaar uma ihi in aan noqdo daba dhilifka imberyaaliistuhu ugu adeegto dibindaabyaynta dadyowga!”
“Adigu laakiin intaad imberyaaliistaha iga dhigaysid maad iga dhigtid shacbi xuquuq ka maqan u halgamaaya, waajibkuna yahay in taageero loo fidiyo? Miyaanan xaq u lahayn in aan u halgamo sidii aan ku heli lahaa jeexayga maqan, macaantayda qarsoon, gacaladaydii nolosha ila wadaagi lahayd, gacanna iigu jirin?”
“Haa. Haddaad qumman tahay, ii dhiib gacanta!”
Axmed Jaamac farxad buu gurigii Sahra kala dheelmaday. Ceel Gaab buu lug ku tegay. Dad meel tuban buu is dhex taagay. Dadku marba dhinac bay u yaacaan. Intii laga orod badiyaana ka soo noqonayeen iyagoo caga jiid ah. Gawaari iyo dad fara badan baa is dhex wiriiryaamaya. Mar dambaa tagsi meel ku dhow istaagay lagu firdhaday. Firdhadkii buu geestiisa ka raacay. Tagsigii oo Axmed iyo saddex kale xambaarsan baa jidka Hodan afka saaray. Saddaxda kale rag iyo dumar waxay ahaayeen Axmed ma eegin. Meel la soo maray iyo meel la joogo isagoon la socon, ayuu ku war helay tagsigii oo taagan iyo gabar isaga iyo nin kale dhex fadhiday oo ku leh, “Iga raalli ahow walaal, ma ii bannayn karaysaa, si aan u dago?”
“Haa. Haa. Soo dhawow walaal!” ayuu ugu jawaabay isagoo sii degaya. Markuu dhulka tegay buu hareeraha eegay, mise meeshuu ku degi lahaa waaba la soo yare dhaafay. Tagsigii kuma laabane jeebkuu gacan u diray. Wixii uga soo baxay buu wadihii gacanta soo taaganayey sacabka ugu shubay. Baaqina kama sugine dib buu u dhaqaaqay.
Jidcaddaha guriga shaqaalaha ka sokeeya ayuu kor ula weecday. Dukaan macdaar ah iyo saddex albaab oo la safan buu dhaafay. Sar aan midabkeedu muuqan oo wax laga guuray u eg buu ag maray. Guri dhinac cariish ka ah, dhinacna dhagax ayaa bidixda ka qabtay. Wuu ka gudbay. Sar cad oo jaranjar afar tallaabo ah leh ayaa ka hor timid. Intuu jaranjartii yarayd afartii tallaabo ku koray buu sarta iridkeedii garaacay. Albaabkii buluugga ahaa waa furmay. Qofkii ka furay isagoon eegin buu intuu gudaha u sii gudbay saddex qol oo dhanka midig ka soo safanaa kii u sokeeyey is hortaagay. Intuu fure jeebka kala soo baxay buu albaabkii gudaha u celiyey. Mugdi cabsi leh baa ka hor yimid. Batoonkii nalka daari jiray buu taabtay. Weli waa mugdi. Waa maxay mushkiladdaani? Nalkii maxaa ku dhacay? Hadda uun buu gartay meesha uu joogaa in ay gurigiisii tahay iyo in nalkii xalay ka gubtay.
Markuu Sahra ka soo dhaqaaqay ayay xusuustiisu ku furfurtay filimo ku kaydsanaa. Dhawr filim baa midba mid u dhiibay. Waxaa ugu horreeyey la kulankii Maana-Faay iyo qorshaha uu u dajin doono soo gacan gelinteeda. Waxaa ku xigey dooddii ku saabsanayd ragga iyo dumarka ee Sahra Yuusuf ku furtay.
Taasina waxay u sii gudbisay dood hal sano ka hor dhex martay isaga iyo saaxiibkii Kulmiye, oo ka mid ahaa dadkii ku soo dhaweeyey gegida maalintii uu dalka ku soo laabtay. Maalintaas isaga ayaa marti qaaday, ka dib markii uu waalidka uga fasax qaaday. Qadada ayay ku dul sheekaysanayeen. Markii iswaraysigii guud u dhammaaday, ayuu Kulmiye saaxiibkii ku yiri, “Axmed ilaa caawa aniga ayaad ii casuman tahay. Hadda markaan qadada ka kacno waynu fariisanaynaa.”
Axmed ma fahmin wuxuu ula jeedo fadhiga, si aan toos ahayn buu u waydiiyey ee yiri, “Xaggee fariisanaynaa?”
“Waxaa la inoo goglayaa guryaha aan fariisto kan ugu heer sarreeya, hablo yaryar oo dhaylo ahna waa la inoo diyaarinayaa. Adigu caawa waad iga nasiib wanaagsan tahay, waayo gabdhaha Xamar waxay kuu yeelanayaan dhadhan xiisa leh, maadaama aad sanooyin badan ka maqnayd. Caawa xaalkaagu waa hawo geddis.”
Axmed markaas uun buu gartay saaxiibki fadhiga in uu ula jeedo qayilaad. Weligii fadhi qaad kama qayb gelin, dhegtase wuu ka maqli jiray “Waa la geerasheeyaa.” Intuu sidii nin aan casumaadda noocaasa u riyaaqin yare aamusay, buu yiri, “Mahadsanid saaxiib. Laakiin aan su’aal ku waydiiyo, haddii aynu hablaheenna dhaylada ku burbursanno xaggee baynu berri ka heli doonnaa kuwo nolosha inala qaybsada ee ubad nala korsada?”
“Dumarku way badan yihiin,” buu ugu jawaabay.
“Dumarku way badan yihiin, waa run, laakiin ragguna way badan yihiin. Haddii nin walba tii uu soo gaaro habeen dhaxmo ka dhigo, xaggee bay ku badbaadayaan bay kula tahay kuwii xaaska noo noqon lahaa?”
“Xaas iyo carruur iyo baddaasba maxaa ku geliyey, adigoo heli kara inaad habeenba tii bilicsan la tumatid? Sow nacasnimo maaha in aad ikhtiyaarkaaga xabsi isku gelisid? Xaggee jirtay iyo, ilmaa jirran iyo, adeerkay baa miyi ka yimide wax soo sii iyo, dhibkaas maxaa kuu geynaya?”
“Ma waxaa kula toosan in guurka la iska daayo oo ay bulshadu jaantaa rogan isu dhex yaacdo, sida xoolaha?” In yar buu hadalka hakiyey isagoo Kulmiye wajigiisa ka eegaya raadka su’aashaasi ku reebtay. Markuu arkay in uusan kala jeclayn, jawaabna soo wadin, ayuu sii watay, ee yiri, “Noloshu waa saxan macaan oo loogu tala galay in laba qof wada ciyaarto. Keligaa taango ma ciyaari kartaa? Haddii kale waa doonni ku dhex socota bad-weyn darbad xoog lihi ka dhacayso. Doonnida keligaa wad haddaad tiraahdana baddu way ku liqaysaa.”
“Adeer taasi,” Kulmiyaa ka qabsaday, “Waa falsafaddii ay noo sheegi jireen buugaagta iyo filimadu. Adiga waa lagaa waaya-aragsan yahay. Qofka aad tilmaamaysid, haddaad maanta raadisid adigaa gidaar madaxa ku dhufan. Xaqiiqada jirta annaga naga warayso. Dumarka hadda jooga doonni ay kula wadaan iska daaye, iyagaa darbad kugu noqonaya, doonnidana kula qalibaya. Markaad badda ku dhacdidna kaaga tegaya.”
“Saaxiib dumarka fikrad xun baad ka haysataa fikraddaas wax ka baddel baan ku oran lahaa, ugu yaraan kala reeb dumarka, illayn isku mid ma noqon karaane.”
Intuu isu qoslay buu yiri, “Hadda waxaan kaa celinayaa gabdhaha maanta jooga guurkooda miyaa? Kuu daayey, waxaad ka heshana ha ila soo marin.”
“Guurku hadduu xun yahay, maxay tahay sababta la isu guursanayey ilaa waagii ifka la uumay?”
“Sabab kale ma aha e, guurku waa sida gabowga iyo geerida, si kastoo aad uga carartid, waa kii marka dambe dabinkiisa kugu rida, mar haddaad ku dhacdidna ka bixiddiisu ma sahlana.”
Axmed iyo Kulmiye dooddii aad bay ula dheeraatay, waxay kala taagnaayeen laba gees oo aan isu imaan karin. Da’ ahaan Kulmiye in yar buu Axmed ka weyn yahay, aad buuse uga buuran yahay. Yaraantoodii isku dugsi bay ahaan jireen. Laakiinse markuu dugsiga dhexe laba sano ku dhacay, ayaa aabbihii wuxuu ku qoray jago waxbarasho oo Talyaanigu dawladda Soomaaliyeed ugu deeqay. Aabbihii waqtigaas wuxuu ahaa mudane baarlamaanka ku jira. Intii uu Itaaliya joogay waqtiga badankiisa wuxuu ku dhammaysan jirey makhaayadaha khamriga lagu cabbo. Cidda qura ee uu xiriirka joogtada ah la lahaa waxay ahayd dhallinyarada sidiisa isma lurayaasha ah, rag iyo dumarba, siiba dumarka oo uu aad u daneyn jiray.
Lix sano ka dib ayuu Xamar ka soo degay, isagoo sheeganaya inuu yahay dhaqaaleyaqaan. Way jirtaa in uu lixdaas sano ka tirsanaa ardayda kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Rooma, laakiinse Allow yaraa waxa uu ka yaqaan cilmiga dhaqaalaha. Waa ciyaal-firintijeer raaxo lagu soo koriyay. Waa shabeel-naagood tumasho jecel. Wuxuu had iyo jeer ka sheekeeyaa gabar ay saaxiib ahaan jireen oo markuu jeclaaday nin kale ka raacday. Dib dambana naag uma aaminin buu yiraahdaa. Sheekadaas inta ka run ah lama oga, waxaase la og yahay hablaha uu hadda arko xiriirkana la yeesho, inay yihiin nooc gaar ah. Waa kuwo balwadu isu keentay. Wuxuu arkaa iyagoo marba ninkii baabuur cad soo ag qotonsada horay ka raacaya. Kii ay xooxda hore ka ritaanna ku oranaya faraskaagii laga badi! Waxaa ku jira kuwo la qabo oo gurigooda marwo sharaf leh looga yaqaan, qaar makhabiyad ahaan loo ilaashado iyo ciyaal-iskuul ciddoodii u haysato in ay dugsi ugu maqan yihiin.
Qorshaha tumashada iyo ugaarsiga dumarku, Kulmiye waxay ugu jiraan hawlmaalmeedkiisa caadiga ah. Ma jirto maalin uusan dabin dhigin iyo habeen uusan bad ku dhex jirin. Canaan joogta ah ayaa eheladi ka soo gaarta, qaarkoodna way ku kala go’een.
Haddaad la sheekaysatid caqli iyo cilmi midna kugu biirin mayo. Waxaad is-oraneysaa waa carruur raad weyn. Waxa qura ee uu si khabiirnimo ah kaaga warrami karaa waa arrimaha dumarka iyo borotokoolka tumashada. Haweenay ifka saaran uusan shabaqiisa soo gelin karin inay jirto lama aha. Tii uu la dhaco jidkana ha ku arkee kama daba haro, wax kasta ha ku qaadatee. Ma kala jecla in ay nin leedahay, in ay carruur tahay ama waayeel tahay, in ay xigto yihiin iyo in kale midna.
Wuxuu qabaa hadduu guursado, xaaskiisu in ayan isaga ku ekaanayn, ee suuq madow geleyso, qudhiisana ku filnaan karayn, ee uu dhaqso uga xiiso dhacayo, meel kalena u oggolaanayn, halkaasna dagaal iyo muran joogto ahi ka billaabanaayo. Guurka sidaasuu ku nacay, saaxiibbadiisna uga waaniyaa. Hase yeeshee Axmed Jaamac diyaar uma ahayn in uu waanadiisa qaato. Isaga guurku wuxuu la ahaa shay muqaddas ah, wax ka sheeggiisana waa dhibsanayey.
Muddadii uu dibedda wax ku baranayey, inkastoo uu la saaxibay gabdho badan oo u dhashay dalkii uu wax ku baran jiray, haddana wuxuu ku riyoon jiray, khayaalkana ugu sawirnayd gabadha Soomaaliyeed ee uu guursan doono, markuu dalkiisii ku laabto iyo carruurta ay u dhali doonto. Guurku hammigiisa aad buu ugu weynaa. Xataa tirada carruurta iyo magacyadooda waa sii diyaarsaday: Maxamed, Faadumo iyo Cali ayuu qorshaystay.
Axmed in kastoo uu hablaha iskala baashaalo haddana reero tumasho ma aha. Wuxuu ku soo koray qoys sabool xigeen ah oo carruur badan. Aabbihii Jaamac-dhegey, inkastoo uu hadda ladan yahay, shaqada dawladdana jago wanaagsan ka hayo, laakiin carruurta wuxuu ku soo koriyey saboolnimo. Markii Axmed waxbarashada dibedda ugu baxayey, odaygu wuxuu ahaa shaqaale caadi ah oo mushaar aan badnayn qaata.
Axmed Jaamac isagoo sariirta ku gadgaddoomaya ayuu arrimahaas oo dhan soo xusuustay, wuxuu barbar dhigay labadii doodood ee midina hal sano ka hor dhex martay isaga iyo saaxiibkii Kulmiye, midina caawa soo dhex martay isaga iyo ina eeddadii Sahra Yuusuf.
Kala fogaa maskaxdii uu ku fekerayey hal sano ka hor iyo tan maanta ku jirtaa. Badanaa waxa ay ku kordhisay waaya aragnimada iyo dhex galka bulshadiisa. Wuxuu garwaaqsaday sannadkaas oo qura waaya aragnimada u korortay in ay ka badan tahay tii uu dhaxlay dhawr iyo tobankii sano ee ka horreeyey.
Sannadkaas ka hor intii uu garaadsaday wuxuu ku dhex jiray nolol ardaynimo. Siduu u ahaa arday ka dhexeeya dugsigiisa iyo gurigooda ayuu dibedda u baxay, inkastoo uu la kulmay duni ku cusub iyo bulsho qaab-nololeedkeedu ka duwan yahay tiisii, haddana noloshii ardaynimada ayuu weli ku dhex jiray. Hadda uun bay la noqotay in uu dadkiisa iyo dabeecadahooda indhaha ku kala qaaday, waxaa kulmay isagoo noloshii ardaynimada ka baxay ee bulsha-weynta dhex galay xilna fuulay iyo isagoo ka qaan gaaray xagga da’da, xagga garaadka iyo xagga aqoontaba.
Waaya aragnimada u korortayse maskaxdiisa kama doorin mashruucii guurka, laakiin qoftii la dhisi lahayd weli gacan uguma jirto, ilna ma saarin. Gabadhiisii riyada ee maanka ugu sawirnayd, muuqaal ahaan waxaa ula dhow Maana-Faaydii uu caawa arkay; mudasho ahaanse ma oga waxa ay noqon doonto.
LaaboMaana-faay Q.2aad Soco..